Ọhịa nke ifufe anọ: onye dere ya, gịnị ka ọ gbasara | Akwụkwọ ugbu a
N'afọ gara aga, akwụkwọ ahụ malitere ire Ohia nke ikuku ikuku ano, akwụkwọ akụkọ mpụ na ihe omimi nke na obere oge nwetara mbipụta nke abụọ. O nwere ike ịbụ na ị hụla ya n'ụlọ ahịa akwụkwọ na anya gị.
Ntọala na Cantabria, akwụkwọ a bụ otu n'ime ihe na -enyekarị mkparịta ụka, mana kedu ihe bụ oke ọhịa nke ikuku anọ? Kedu onye dere ya? Gịnị mere ị ga -eji na -agụ ya? Anyị ga -agwa gị.
1 Onye dere Forest of the Four Winds
2 Kedu ihe bụ oke ọhịa nke ikuku anọ
4 Ọ bụ akwụkwọ pụrụ iche ka ọ bụ saga?
5 Kedu ihe kpatara ị ga -eji nye ohere oke ọhịa nke ikuku anọ
Onye dere Forest of the Four Winds
Ebe e si nweta ya: María Oruña
Ohia nke ikuku ikuku ano ọ gaghị abụ akwụkwọ ma ọ bụrụ na onye edemede María Oruña enweghị echiche ahụ. Agbanyeghị, dị ka ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ na -ekwu maka akụkụ ụfọdụ nke akụkọ ntolite, ọ chọrọ ọtụtụ akwụkwọ iji kee ihe niile agbụ. N'ezie, na njedebe nke akwụkwọ onye dere ya n'onwe ya agwala akụkụ ndị dị adị (nke akụkọ ma ọ bụ akụkọ) na nke bụ akụkọ ifo, ka anyị wee nweta echiche maka nnukwu nyocha ọ mere.
Mana onye bụ María Oruña?
A mụrụ María Oruña na 1976 na Vigo. Ọ bụ onye edemede Galician na akwụkwọ a, Ọhịa nke Ifufe Anọ abụghị akwụkwọ mbụ ya. Nnukwu ihe ịga nke ọma bịara onye ode akwụkwọ a site na usoro ọmụmụ Puerto Escondido ya, akwụkwọ atọ nke ụlọ obibi akwụkwọ Destino bipụta na nke akara akara mpụta mbụ na akwụkwọ akụkọ mpụ, na -enwe nnukwu ihe ịga nke ọma n'ihi na n'oge na -adịghị anya, a sụgharịrị ya na Catalan, German na Spanish. .
Ọhịa nke ifufe anọ bụ akwụkwọ akụkọ kacha ọhụrụ nke onye ode akwụkwọ, nke ọ wepụtara na 2020, n'ụlọ mkpọrọ zuru oke, mana nke ahụ egbochighị ya ịga nke ọma.
Ugbu a, ọ bụ naanị onye edemede? Ọfọn eziokwu bụ na mba. N'ezie Ọzụzụ ya bụ iwu, ebe ọ bụ onye ọka iwu. Mana nke ahụ emeghị ka ọ lụọ ọgụ ka ọ bụrụ onye edemede yana kwa onye nta akụkọ. Ruo afọ iri, ọ na-arụ ọrụ dị ka onye ọka iwu na-azụ ahịa na azụmaahịa, na 10 bụ mgbe ọ malitere akwụkwọ akụkọ mbụ ya, La mano del arquero, nke kwuru maka iyi egwu ebe ọrụ na iji ikike eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Dị ka onye ode akwụkwọ si kwuo, akwụkwọ akụkọ a dabere n'okwu nke ya onwe ya mara site n'ọrụ ya.
Kedu ihe bụ oke ọhịa nke ikuku anọ
I kwesịrị ịma gbasara oke ọhịa nke ikuku anọ bụ akwụkwọ akụkọ nke na -eme n'ime oge abụọ. N'otu aka, oge gara aga, ebe ị nwere Dr. Vallejo na Marina, ụbọchị ha n'ụbọchị na narị afọ nke XNUMX na ihe niile nke pụtara, ma nwoke ma nwanyị.
N'aka nke ọzọ, ị nwere onyinye ugbu a, ya na Jon Bécquer, ụdị onye nyocha nke na -achọ eziokwu, ma ọ bụ na ọ bụghị, akụkọ ifo.
Akụkọ ahụ na -aga n'etiti ahịrị abụọ ahụ, ebe ihe odide niile nwere njikọ chiri anya. Enwere ike ikwu na, n'agbanyeghị na isi okwu bụ igbu ọchụ nke jikọtara Jon Bécquer na narị afọ nke XNUMX taa, ka akwụkwọ akụkọ na -aga n'ihu, ị ga -ahụ ka ihe odide ndị ahụ nwere njikọ chiri anya na isi ihe omimi: akụkọ banyere mgbanaka itoolu.
Dị ka akụkọ a siri kwuo, e nwere mgbaaka itoolu nke ndị bishọp itoolu nwere ikike ime anwansi, nwere ike ịgwọ ọrịa. Mana anyị agaghị ekpughere gị ihe ndị ọzọ ka ị ghara imebi ihe ọ bụla n'akwụkwọ ahụ.
Anyị hapụrụ gị synopsis:
Ná mmalite narị afọ nke XNUMX, Dr. Vallejo mere njem site na Valladolid gaa Galicia ya na nwa ya nwanyị Marina ije ozi dị ka dọkịta na nnukwu ebe obibi ndị mọnk dị na Ourense. N'ebe ahụ, ha ga -achọpụta ụfọdụ omenala na ha ga -enweta ọdịda nke Ụka. Marina, nwere mmasị n'ịgwọ ọrịa na ahịhịa mana enweghị ikike ịmụ ihe, ga -alụ ọgụ megide mgbakọ nke oge ya na -etinye na ihe ọmụma na ịhụnanya, a ga -emikpukwa ya n'ime njem nke ga -edobe ihe nzuzo ihe karịrị otu puku afọ.
N’oge anyị, Jon Bécquer, onye na -ahụ maka ọmụmụ gbasara mmadụ nke na -arụ ọrụ na -achọpụta iberibe akụkọ ihe mere eme furu efu, na -enyocha akụkọ ifo. Ozugbo ọ malitere nyocha ya, n'ogige ebe obibi ndị mọnk ochie ahụ ozu nwoke yi uwe Benedictine nke XIX pụtara. Eziokwu a ga -eme ka Bécquer banye n'oké ọhịa Galicia na -achọ azịza ma na -agbadata usoro dị ịtụnanya nke oge.
N'ime oke ọhịa nke ikuku anọ anyị ga -ezute ọtụtụ agwa mana, enwere atọ n'ime ha, bụ ndị pụtara ìhè maka inwe olu abụ, ma ọ bụ n'ihi na onye ode akwụkwọ lekwasịrị anya na ha. Ndị a bụ:
Dọkịta Vallejo. Ọ metụtara agwa Marina (nke bụkwa isi), ebe ọ bụ na nke a bụ nwa ya nwanyị. Usoro iheomume ya bụ nke gara aga, ebe ọ bụ na ọ ga -agwa gị gbasara akụkọ ya na mbido narị afọ nke XNUMX mgbe ya na nwa ya nwanyị biri na Galicia ịrụ ọrụ dị ka dọkịta na ebe obibi ndị mọnk nke Ourense.
Mmiri. Ikekwe ọ bụ ya bụ isi agwa nke akwụkwọ akụkọ. Ọ bịarutere n'ebe obibi ndị mọnk nke Ourense na 1830 wee malite inwe mmasị na ọgwụ (site na nna ya) na ahịhịa (nke ndị mọnk na nna nke ya). Ya mere, ọ na -esi n'ihe "nkịtị" maka nwanyị n'oge ahụ, yana n'ihu nke a. Ọnọdụ ya dị ka nwanyị pụtara na ọ ga -alụ ọgụ megide mgbochi ndị a amachibidoro iwu.
Jon Bécquer kwuru. Ọ bụ agwa dabere na onye ọzọ dị adị n'ezie. N'ime akwụkwọ ahụ, ọ bụ onye na -achọpụta nka bụ onye na -akpata akụkọ banyere mgbaaka itoolu. Somefọdụ na -akọwa ya dị ka Indiana Jones mana ọ naghị enwe mmasị na ya n'ihi ụdị onye ọ bụ.
Ọ bụ akwụkwọ pụrụ iche ka ọ bụ saga?
Ọtụtụ oge, ịgụ onye edemede ọhụrụ na -enye anyị ntakịrị ụjọ, ọkachasị n'ihi ejiji ugbu a nke ịtọhapụ usoro, trilogies na sagas nke ọtụtụ akwụkwọ mejupụtara, ebe akụkọ anaghị akwụsị.
Ọ bụrụ na anyị na -eburu n'uche na tupu nke a, María Oruña wepụtara trilogy, ọ bụ ihe nkịtị na ị nwere obi abụọ ma akwụkwọ ahụ ọpụrụiche ma ọ bụ akụkụ nke saga.
Ọ bụkwa onye ode akwụkwọ n'onwe ya mere ka o doo anya: a akụkọ na-emechi onwe ya. Nke ahụ bụ, ọ na -amalite ma mechie n'otu akwụkwọ; na -enweghị ihe ọzọ. Nke ahụ na -eme nyocha na nkata niile ka ọ bụrụ otu akwụkwọ nke enwere ike ịgụ ya ngwa ngwa n'ime ụbọchị ole na ole (ọ bụrụhaala na ọ na -ejide gị, n'ezie).
Kedu ihe kpatara ị ga -eji nye ohere oke ọhịa nke ikuku anọ
Ị marala ntakịrị ihe banyere oke ọhịa nke ifufe anọ, mana ikekwe ị chọghị ịnwale ya, ma ọ bụ ị maghị ma ị kwesịrị ịgụ ya ma ọ bụ na ị gaghị agụ ya. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ọ bụ akwụkwọ pụrụ iche, nke na-ejedebe onwe ya. Ọ bụrụ na ị gụbeghị onye ode akwụkwọ mbụ, ịbanye na trilogy nwere ike buru oke ibu. Mana ị nwere ike gụọ akwụkwọ nwere mbido na njedebe iji chọpụta ma ị masịrị mkpịsị akwụkwọ ya ma ọ bụ na ọ masịghị gị.
Ọ bụ ihe a akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Spain. Ọtụtụ oge anyị na -amata gbasara akụkọ mba ndị ọzọ karịa nke anyị. Nke ahụ dịkwa mwute. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka ndị mmadụ siri biri na mpaghara Spain na narị afọ nke XNUMX wee mụtakwa ihe gbasara ọgwụ ọjọọ, ahịhịa, ọgwụ ... ị nwere ike nwalee ya.
La nwanyị nwere oke ọrụ na akwụkwọ akụkọ. Anyị na -ekwukwa maka narị afọ nke iri na itoolu, mana anyị ga -ahụ ka nwanyị nọ ebe a gosipụtara onwe ya n'ụzọ dị oke egwu.
Ị gụọla ọhịa oke ikuku anọ? Kedu ihe ị chere gbasara ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ohia nke ikuku ikuku ano